Sacuudiga oo Xabsi kasii deynaya Bil-yineer Itoobiyan ah [Akhri Sababta loo xiray]
RIYADH - Sacuudiga ayaa lagu wadaa inuu xabsiga kasii daayo Maxamed Xuseen Al Amoudi, oo ah Bil-yineer Sacuudi-Itoobiyaan ah, kaasoo bishii November la xiray intii ay socdaan Howlgalada ka dhanka ahaa Musuq-maasuqa, sida uu sheegay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo dalkaasi booqasho ku tagey.
Abiy Axmed ayaa tilmaamay in hadalkan shaaciyay maalintii Sabtida kadib markii uu kasoo laabtay safar labo maalin ah oo uu ku tegay Boqortooyada Sacuudiga, halkaasoo uu kula soo kulmay Dhaxal-sugaha Mohammed bin Salman.
Al Amoudi, oo ah wiil ay iska dhaleen Aabo Sacuudiyaan ah iyo Hooyo Itoobiyaan ah, ayaa qeyb ka ahaa 11 Amiiro, Afar wasiiro ah iyo Ganacsato waa weyn oo lagu xiray Sacuudiga, intii uu socday dhaqdhaaq cusub oo Musuq-maasuqa ka dhan ah.
Ninkan ayaa maalgeshiyo xoogan oo dhanka Dhismaha, Beeraha iyo Macdanta ku sameeyay dalal ku yaalla Geeska Afrika, oo Itoobiya ay kamid tahay.
“Xariga hal qof oo Itoobiyaan ah waa Xariga dhamaan Itoobiyaanka. Xariga Sheekh Al Amoudi waa Ajandaha ugu wayn ee dhamaan Itoobiyaanka,” ayuu Abiy ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtey Addis Ababa
“Waxaan gudbinay dalab – Waan hubnaa in dhowaan lasoo dayn doono,” ayuu ku daray hadalkiisa, isagoona kulan balaaran
Mas'uuliyiinta Sucuudiga ayaa diidey warar sheegaya in si xun loola dhaqmay Al Amoundi mudadii xabsiga ku jiray isaga iyo maxaabiista kale, oo uu kamid yahay Alwaleed bin Talal – oo ah maalgashade caalamiga ah oo u dhashay dalkaasi.
Jimcihii, Itoobiya ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in Sacuudiga uu ogolaaday inuu sii daayo 1,000 muwaadiniin Itoobiyaan ah oo xabsiga ku jira, kuwaas oo lagu eedeeyay dembiyo kala duwan.
Mas'uuliyiinta xukuumada Riyadh waxay wadaan qorshihii lagu musaafurin lahaa in ka badan 500,000 oo Itoobiyaan ah, kuwaasoo si sharci ah ku jooga dalkaasi. Illaa iyo hadda, 160,000 ayaa dib loogu celiyay waddankan ku yaalla Geeska Afrika.
Sacuudiga oo xiray Amiirro ku mudaharaaday Madaxtooyada
Caalamka 07.01.2018. 11:29
Bin Salman oo xiray xubo sare oo katirsan boqortooyadda Sacuudiga
Caalamka 07.03.2020. 11:57
2019: Tirada dilalka toogasho ee ka dhacay Sacuudiga oo la shaaciyey
Caalamka 13.01.2020. 22:18